स्थीर सरकारका लागि बामपन्थी शक्तिहरुले जित्नुपर्छ: प्रचण्ड - Everest Dainik - News from Nepal
स्थीर सरकारका लागि बामपन्थी शक्तिहरुले जित्नुपर्छ: प्रचण्ड
'चितवनमा उम्मेद्वारी मेरा लागि पुनर्मिलन पनि हाे'
भरतपुर, कार्तिक १८ । नेकपा माअाेवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले स्थीर सरकारका लागि बामपन्थी शक्तिहरुले जित्नुपर्ने बताएका छन् ।
भरतपुर १४ शिबनगरमा अायाेजित कार्यक्रममा प्रचण्डले भने “स्थीर सरकारका लागि बामपन्थी शक्तिहरुले जित्नुपर्छ। पाँच वर्षका लागि स्थीर सरकार बन्याे भने देशकाे मुहार फेरिन्छ” प्रचण्डले थपे, “मैले १० महिनामा जुन काम गरें, त्यसले ईच्छाशक्ति भयाे भने धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेकाे छ। ५ वर्ष स्थीर सरकार बनाएर हामी देशकाे विकास र समृद्धिमा क्रान्तिकारी रुपान्तरण गर्न चाहन्छौं।”
चितवन क्षेत्र नं. ३ का उम्मेद्वार रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले चितवनमा अाफ्नाे उम्मेदवारी पुनर्मिलन पनि भएकाे बताए “अब चितवन अाउँदा छुट्टै भावना पैदा हुन्छ, बचपनमा सँगै खेलेका पढेका साथीहरुसँग पुनर्मिलन भएकाे छ। हुर्काएका काका, काकी हुनुहुन्छ, पढाएका गुरुहरु हुनुहुन्छ। यसले मलाई पुराना दिनहरुकाे स्मरण गराएकाे छ ।
याे पनि पढ्नुस यी हुन् माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका उम्मेद्वार
कार्यक्रममा चितवन क्षेत्र नं. ३ (क) का उम्मेद्वार कृष्ण भूर्तेल, ३ (ख) का उम्मेद्वार रामलाल महताे, एमाले नेता देवी ज्ञवाली, माअाेवादी केन्द्रका नेता सूर्य सुवेदी लगायतले बाेलेका थिए । कार्यक्रमपूर्व बाम गठबन्धनको चितवन क्षेत्र नं. ३ का कार्यालय उद्घाटन गरिएकाे छ ।
बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनपछि चुनाव रोक्न अनेक प्रयास गरिएको उनले बताए भने, ‘गीरिजाबाबूले कांग्रेस हार्छ भन्ने सोचेको भए चुनाव हुँदैनथ्यो। मैले त्यसरी सोचेको भए स्थानीय तहको चुनाव हुदैनथ्यो। अहिले कांग्रेसले हार्छ कि भन्ने हिसाब गर्न थालिएको छ। अहिले नै धेरै कुरा भन्दिनँ, समय आएपछि भनुँला।
तर, कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व जस्ता काण्ड मच्चाएर चुनाव हुन नदिने सम्भावना छ। सबै बामपन्थी र प्रगतिशील शक्तिहरु सतर्क हुन जरुरी छ। जनमतमा जित्ने नदेखेपछि प्रतिक्रियावादी शक्तिले सोच्ने जालझेल र नरसंहार नै हो।’
अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने सोच २४ वर्षअघि नै थियो। २०५० सालमा म नेकपा एकताकेन्द्रको महामन्त्री थिएँ। केही बामपन्थी बुद्धिजीवीको सुझावपछि जेठ ११ गते मेरो र मदन भण्डारीको भेट्ने समय मिलाइएको थियो। नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउनेबारे छलफल हुँदै थियो। तर, दुर्भाग्य जेठ ११ आएन। जेठ ३ गते नै मदन भण्डारीको हत्या गरियो। हामी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी एमाले एकताका लागि केही प्रयास गरिएको थियो, डकुमेन्ट आदान प्रदान गरिएको थियो। तर, एकता हुन सकेन। यसपटक हरहालतमा हामी पार्टी एकता गर्छौ र नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउँछौं।’
याे पनि पढ्नुस पार्टी एकता नटुंगिएसम्म सरकारमा जाँदैनाै : माअाेवादी केन्द्र
‘माओवादी एमाले तालमेल र एकताको तयारीपछि १० रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ, अब अधिनायकवाद आउँछ, निरङ्कुशता आउँछ जस्तो हल्ला गरिदैछू अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘हाम्रो गठबन्धन बामपन्थी लोकतान्त्रिक गठबन्धन हो। कांग्रेसको गठबन्धन दक्षिणपन्थी लोकतान्त्रिक गठबन्धन हो। कांग्रेसले प्रजातन्त्र भन्थ्यो। लोकतन्त्र कम्युनिष्टहरुको नारा हो। हामी कांग्रेसभन्दा कैयौं गुणा लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील छौं।’